Kangana Ranaut Iyo 5 Jilaa Weerarkii Ugu Weynaa Ay Ku Qaaday Taariikhda Aduun Weynahana La Yaabeen (+Sawiro) – Filimside.net
Kangana Ranaut Iyo 5 Jilaa Weerarkii Ugu Weynaa Ay Ku Qaaday Taariikhda Aduun Weynahana La Yaabeen (+Sawiro)
Maanta waxaa loo dabaal dagayaa sanad guurada dhalasho atiriishada caanka ah Kangana Ranaut oo maanta oo kale 23 Maarso sanadkii 1987 waxayna maanta si rasmi ah u jirsatay 32 sano.
Ranaut waxaa lagu tilmaama atiriishada ugu muranka badan Bollywoodka dhanka dooda iyo hadal adeegana aan lagu gaarin qofna seefteda kalama gabato ha ahaado Super Star ama xidig caadi ah weerar ayee ku qaada hadii qofkaas qof qaldan ula muuqdo.
Munaasabada dhalashadeeda xidigtaan waxaa laga qorayaa xog badan aan isla aragno 5 jilaa Kanagan waeerarkii ugu weynaa xiliyo kala duwan ay ku qaaday iyo hadaladii ad-adeega ka muuqday ay ku dhahday fadlan hoos kaga bogo.
Kangana Ranaut iyo Karan Johar:
Sanadkii 2017 bilawgiisa ayee isku dhacee filmsameye Karan Johar xili ay ka qeyb galeesay barnaamijkiisa Koffe With Karan 5 waxaa goobta ka dhashay ereyga “isqaraabeysi” si cad ayee ugu tiri Karan oraahdan,”waxaad sameeysay is qaraabeysi.”
“Dadka xigtadaada ah iyo saaxiibadaada kuudhow ayaad Bollywoodka keenta halka kuwa kale aadan caawinin” haddaba mowduucan ay Kangana abuurtay ilaa maanta waa mid Hindiya laga hadal hayo 2 sano kahor ayeena sheekadan ahed.
Kangana Ranaut Iyo Sonam Kapoor:
Kangana ayaa ka hadashay barnaamijka dumarka loogu ololeenaayay sanadkii hore ee Me Too Movement iyadoo goobta ka shaaciysay in filmsameye Vikas Bahl hadda kahor anshax xumo kula kacay Sonam Kapoor oo iyadana dood jecel ayaa sheekada Kangana Tv-ga ka daawatay kadibna baraha bulshada ayee ku weerartay Kangana iyadoo leh.
“Kangana waa qof muran jecel wax aan micno laheen ayee ka hadleysa sheekadan aniga xaqiiq ilama ahan waxaan dhihi lahaay Kangana inee xaqiiqada ka hadasho ama iska aamusto” Kangana oo yaa ila hadlo ka ah ayaa aragtay oraahdii Sonam saxaafada horteeda ayeena sidan ugu jawaabtay.
“Yaa xaq u siiyay Sonam Kapoor inee dhibkeyga beeniso ma waxay u heesataa cadeyn ileen Bollywoodka waxaa kudhexjiraan doqon Sonam Kapoor oo kale ah xaq ayaan u leeyahay inaan dhibkeyga ka hadlo mana wanaagsana hubsiimo la’aan in baraha bulshada lagu qeyliyo Sonam waa garteeda ileen dhibka iqabsaday wali kuma dhicin dharag dhacsi ayee waddaa.”
Kangana Ranaut iyo Ranbir Kapoor:
todobaadyo kahor ayee ahed markee weerar afka ku qaaday jilaaga caanka ah Ranbir Kapoor xili uu isaga gaabsaday ka hadlida siyaasada qasan ee dalkiisa kajirtay waxayna tiri iyado hadleeyso,“Waxaan maqlay Ranbir inuu yiri’aniga biyaha iyo korontada gurigeyga si toos ah ayee u imaadan marka inaan ka hadlo siyaasada ma haboona” balse Ranbirow waxaan ku leeyahay nolosha raaxada leh iyo gawaarida noocyada aad wadato dalkaada dadkiisa madaxooda ayaad u wadataa sidee ku awooday inaa sida u hadasho.”
“Anigaba waan heestaa koronto iyo biyo oo si toos ah ayee iigu soo dhacaan hadana kama gaabsado hadii dhib dhaco iyo arimaha ka hadlidooda muhiim tahay kaaga daran maanta xaalad adag ayaanba kujirnaa Ranbir dalkaada dhinac ha iska dhigin adigoo shaqadaada ilaalsanaayo.”
Kangana Ranaut Iyo Hrithik Roshan:
Xidigahan xiriir hoose ayee wada lahaayen balse fashil ku dhamaaday dagaalkoodana waa mid lawada ogyahay sanadkii 2017 ayuuna Bollywoodka si weyn u saameeyay mid kamid ah oraahdii Kangana ku weerartay Hrithik waxay ahed,”nasiib ayaan leeyahay waxaan xiriir la sameeyay qof nacas ah haduu caaqil ahaan lahaa saacan xabsi ayaan kujiri lahaa.”
Kangana Ranaut iyo Alia Bhatt:
Kangana xitaa Alia Bhatt weerar ayee ku qaaday waxay tiri iyadoo yaseysa Alia Bhatt,”gabdhaha yar yar ee Bollywoodka kudhex jiraan waxay igu wareeriyeen soo dirida goos goosyo aflaamtooda ah sida Alia Bhatt oo kale oo iisoo dirtay goos gooska filmkeeda Raazi iyadoo iisoo raacisay qoraal ah fadlan daawo.”